Farmaajo Muxuu Ka Ogaa Wareejinta Hogaamiyaha ONLF Qalbi Dhagax???
Monday, 04 September 2017 13:10
Si guud qof weliba wuu fahmikaraa in Madaxwaynuhu arrintan iyo heererkay maraysay wuxuun kala socday laakiin waxaan idin la wadaagi arrimo dhacay oo xaqiiqo ah.
Markii uu Cabdikariim Gaalkacayo ku xidhnaa waxaa in Muqdisho la keeno doorka runta ah ku lahaa safaaradda Ethiopia iyo masuuliyiinta Farmaajo ka hoosaysa, dadka caadiga ah iyo Farmaajo waxaa loo sheegayey in Cabdikariim NISA soo qaaday si dowladdu go’aan uga gaadho arrinkiisa.
Markii Muqdsiho la keenay rag muxtarim ah oo masuuliyiin qaran ah, ayaa M/weyne Farmaajo; kala hadlay arrinta Cabdikariim, waxayna ku yidhaahdeen: “Mudane ninkan haddayna dowladdu wax dembi ah u haysanin sii daa, isaguna wuxuu u hadlay si fiican oo wuxuu yidhi: waa sax e, waxaynu iswaydiin uun ma halkan ayeynu kusii daynaa mise dal kale ayeynu u qaadnaa? intaas markii lagu kala tagay waxaa dhacday xoogaa isdhigasho ah oo qolyihii Cabdikariim sii dayntiisa ku hawlanaa (xildhiaano, sanatarro iyo dad magac leh) ayaa waxay is dhacsiiyeen mar haddii ninkii Muqdisho la keenay M/waynihiina la kulmeen inay arrintiisu sahlan tahay, Jaaniskaas waxaan beer-daraynin Saraakiisha Sirdoonka Ethiopia iyo safaaradooda, tusaale ahaan waxaa la xaqiijiyey in muddo 24 saac guddohood ah ay 5; jeer kulmeen Agaasimaha NISA iyo Saraakiisha Ethiopia, intaas waxaa dheeraa oo aana xaqiijin karin laakiin aan kasoo xigtay dad xog-ogaal ah in dowladda Ethiopia codsi rasmi ah soo gaadhsiisay xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya MR, Khaire.
Agaasinka Madaxtooyadu wuxuu cidhiidhi geliyey oo uu aad u adkeeyey fursadihii lagula kulmi lahaa M/weyne Farmaajo, gaar ahaan masuuliyiintii Cadikariim sii dayntiisa u’ololaynayey oo dhammaantood ah masuuliyiin u badan labada gole ee Baarlamaanka, oo waxaaba dhacday in rag xildhibaanno ah 8; saacadood madaxtooyada joogeen kadibna iska tageen iyagoon arag Farmaajo.
Maalintii wareejintu dhacday waxaa Madaxwayne Farmaajo wada jir ula kulmay R/wasaaraha iyo Agaasimaha NISA Mr, Sanbaloolshe, waxayna Farmaajo siiyeen warbixin odhanaysa: “Mudane; Cabdikariim iyo Ethiopia way is og-yihiin oo ciidankeenna umbaa ninkan soo qabtaye isaga iyo Ethioia waxba iskuma diidana ee aynu dhexdooda ka baxno, Farmaajo; hadalkaas wuu qaatay laakiin xoogaa dareen ah ayaa ku jirtay sida dib innooga muuqan-doonta, durba wuxuu Farmaajo dalbaday in loogu yeedho qaar kamida xildhibaanaddii sii daynta Cabdikariim ku howlanaa, goordambe markay xildhibaanadu utageen Farmaajo wuxuu la wadaagay xogtii lagasiiyey # Qalbidhagax ee ah inay isaga iyo Ethiopa is ogyihiin, intaas kolkuu yidhi ayey xildhibaanadii ku yidhaahdeen: “M/weynow ninkan 30; sano ayey Ethiopia raadinaysay, warkaasina majiro, talo adigay ku joogtaaye ama siidaa ama hayso” Markii intaas lagu yidhi waxay xildhibaanadu sheegeen inuu Madaxweynuhu si u naxay oo xoogaa shucuuri ka muuqatay oo weliba yidhi: “Haddaa ma beenbaa la iisheegay?”” (Laakiin waa goor ninkii Ethiopia la wareegtay) .Markaad xogtaas aannu Masuuliyiinta kasoo xiganay qiimayso waxaa kuu muuqanayasa in Mr, Farmaajo looga tallaabsaday jar isna uu dabinkii galay, laakiin tani kama leexinayso masuuliyadda dembigii dhacay oo wuxuu naqonayaa qofka koowaad ee loo haysto.
Markii Cabdikariim lagasoo qaaday Magaalada Gaalkacayo ee MUQDISHO la keenay waxaa lagu wareejiyey ciidanka NISA; wuxuuna ku xidhnaa xaruntooda waxaana loola dhaqmay si wanaagsan, isaguna wuxuu qabay kalsooni 100% ah inuu Ethiopia ka badbaaday. Kadib markuu heshiiskii Wareejintu dhacay ayaa waxaa taliyaha askartii NISA ee haysay Cabdikariim sh muuse loo sheegay in Maxbuuska loo wareejinayo goob kale (Xabsi kale) Cabdikariim laftiisa waxaa lagu wargeliyey in goob kale lagaynayo.
Waxaa goobta tagay Agaasimaha NISA Sanbaloolshe iyo la taliyaha M/weyne Farmaajo S/guuto Bashiir goobbe; waxayna wateen baabuur ayna xabbaddu karin oo laga leeyahay Madaxtooyada (villa Somalia) waxaana la socday askarta koofiyad casta ah ee Madaxtooyada. Kadib waxaa Cabdikariim la geeyey Safaaradda Ethiopia oo Madaxtooyada ku dhextaalla, waxaana halkaas kasoo raacay laba sarkaal oo ka tirsan Wardoonka Ethiopia, markuu arkay Saraakiisha Ethiopian-ka ayuu Cabdikariim dareemkii ugu horreeyey qaaday, isla dhawr daqiiqo yar gudohood waxaa la geeyey Airport-ka MUQDISHO.
Markii laga dajiyey gaadhigii lagu waday ee larabay in diyaaradda lasaaro ayuu Cabdikariim dagaalamay wuxuu ahaa nin xoog badan waxaa xakaym waayey ilaaladii wadday, meeshii waxaa ka dhacay buuq, waxaa soo farageliyey Saraakiishii iyo askartii Airport-ka joogtay waxayna yidhaahdeeen: “celiya ninkan!, diyaaradda xoog laguma saarayee”. Kadib maxaa dhacay? Dibbaa loosoo celiyey Cabdikariim, waxaa la geeyey xerada Afisyoone, waxaa lagu sameeyey jidh-dil xoog badan, waxaa aad looga garaacay madaxa, lugaha iyo gacmaha markii la jilciyey waxaa madaxa loo galiyey maro lagu qariyey dhammaan madixiisa, waxaana loo xidhay laba dible. Sidaas ayaa markale loogu qaaday Airport-ka laakiin markan ma’uuna ahayn nin isdhaq-dhaqaajin kara! waxaana lasaaray diyaarad yar oo garoonka meel gees ah ka taallay isagoo ay garbaha kaga jiraan laba askari oo soomaali ah oo Koofiyad cas ah, waxaana sii raacay Saraakiil Tigree iyo soomaali isugu jirta, waxaana laga dejiyey Magaalada Baydhabo.
Maxaan kasii wadaa hadalka?! Caku soomaalinimooy! Caku islaamnimooy! Caku bani’aadam-nimo oy!… Caku Aadan cabdulle Cismaanow (Airport- ka ayaa magaciisa lasiiyey waxaana ka dhacay waxaas) Caku Calankii buluugga ahaayow (isaga difaaciisa 3 xabadood ayaa ugu dhacay jidhkiisa).
FG: xogtan waxaa ila wadaagay saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo arrintan lasocday bilow iyo dhammaad. # Dhiibista_QALBIDHAGAX Fadlan qaybi qoraalkan adigoo Mahadsanid.
Qoraalkan waxa qoray oo iska leh qoraaga magaciisu xagga hoose ku qoran yahay
WQ: Ismaaciil Cali Ismaaciil
(Ina Cali Fooley)
More in this category: « Guusha Ahmed-yaasiin uu ku guulaystay ka mid noqoshada Shir-gudddoonka golaha Baaralamanku waa guul u soo hoyatay golaha iyo Somaliland. SONYO Dallad Qaran Mise Dallad Qudhaabsi W/Q. Mustafe Axmed Maxamed Geedi »